Yimaphi Amakhono Wokumaketha Obaluleke Kakhulu ku-2018? | Martech Zone
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule bengisebenza kumakharikhulamu ezinkundla zokumaketha ezidijithali kanye nezitifiketi zenkampani yamanye amazwe kanye neyunivesithi, ngokulandelana. Kube wuhambo olumangalisayo - sihlaziya ngokujulile ukuthi abathengisi bethu balungiswa kanjani ezinhlelweni zabo ezisezingeni, nokukhomba izikhala ezizokwenza amakhono abo athengiswe kakhulu emsebenzini.
Okusemqoka ezinhlelweni zeziqu zendabuko ukuthi ama-curriculae avame ukuthatha iminyaka eminingana ukuthi avunyelwe. Ngeshwa, lokho kubeka iziqu emuva kweminyaka njengoba bengena emsebenzini ngaphandle kokuthi babe nokuqeqeshwa okwakhayo kakhulu.
Okubaluleke ngaphezu kokufunda indawo eguquguqukayo yamapulatifomu ezobuchwepheshe bokumaketha, abathengisi kudingeka babe nendlela eqondisiwe yokuhlela, ukukala, nokwenza noma yiluphi uhlelo lokumaketha. Kungakho ngithuthukise ifayela le- uhlu lokuhlola lomkhankaso wokumaketha… Wuhlu olunzulu oluqinisekisa ukuthi isinyathelo sakho sizophumelela ngangokunokwenzeka.
Ubuchwepheshe kanye nemithombo yezokuxhumana kube nomthelela omkhulu kwezentengiso eminyakeni embalwa edlule. Kakhulu, ukuthi osomabhizinisi abancane, osomabhizinisi, kanye nabakhangisi bangadinga ukuvuselela amasethi abo wamakhono ukuze bahlanganyele kahle nesizukulwane esilandelayo sabathengi (Gen Z) ngenkathi besebenzisa ngempumelelo ubuchwepheshe obuqhubekayo. IMaryville University Bachelor's in Marketing
IMaryville University ihlanganise lolu hlu olunemininingwane yamakhono adingekayo ukuze abathengisi baphumelele emsebenzini. Qiniseka ukuthi ufunda okuthunyelwe kwabo okugcwele nge-infographic engezansi, 11 Amakhono Esimanje Wokumaketha Abasunguli Bebhizinisi Abenza Kakhulu.
Amakhono Okumaketha Asemqoka Kakhulu Ka-2018
Ukumaketha kokuqukethwe - Izinhlangano zazo zonke izinhlobo zingasebenzisa abathengisi abakha okuqukethwe koqobo, okubandakanyayo, nobuciko. Ama-86% wabakhangisi basebenzisa ukumaketha kokuqukethwe njengengxenye ejwayelekile yecebo labo, noma ngabe basebenzela izinhlanganisela zomhlaba wonke noma amabhizinisi amancane, endawo Kodwa-ke, yi-36% kuphela ehlola ubuchwepheshe bokumaketha okuqukethwe njengokuvuthiwe noma okuyinkimbinkimbi. Ukudalwa kokuqukethwe nokuphathwa, i-web analytics, kanye nokuphathwa kwamaphrojekthi edijithali wonke amakhono aphambili kule ndawo.
Ukumaketha Kwamaselula - Abantu baseMelika abayizigidi ezingama-219.8 - u-67.3% wabantu base-US - bane-smartphone. Lokhu kwenza amasu eselula abaluleke emizamweni yenhlangano yokumaketha. Ithuba lokufinyelela izethameli eziningi ngeselula likhulu, njengoba abaseMelika bebheka izingcingo zabo ngokwesilinganiso sezikhathi ezingama-47 ngosuku. Leyo nombolo icishe iphindwe kabili kwabaseMelika abaneminyaka eyi-18 - 24, ababheka izingcingo zabo ngokwesilinganiso sezikhathi ezingama-86 amakhono asemqoka nsuku zonke kule ndawo afaka ukwakheka kwamaselula, ukuthuthukiswa kwamaselula, kanye ne-e-commerce analytics.
Ukuthengisa Nge-imeyili - Ukumaketha nge-imeyili kube isu eliyisisekelo seminyaka eminingana futhi kuzoqhubeka nokuba njalo. Ama-86% wabakhangisi basebenzisa i-imeyili ukusabalalisa okuqukethwe kwezentengiso. Ukuzenzakalela kokumaketha, amasu okubandakanya ababhalisile, namasu okukhula kwababhalisile konke kubulala okubalulekile ngaphakathi kwaleli su.
Ezokumaketha Kwezenhlalo - U-70% kaGen Z uthenga imikhiqizo nezinsiza ngemithombo yezokuxhumana, okwenza ukumaketha kwezokuxhumana kube iqhinga elibalulekile lokufinyelela kwinani labantu abangama-69% kaGen Z asebenzise i-Instagram, nokuyenza ibe yinkundla yezokuxhumana ethandwa kakhulu kulesi sizukulwane. Lokhu kulandelwa yi-Facebook ne-Snapchat, ngayinye esetshenziswa yi-67%. Ngokwesilinganiso, abathengisi basebenzisa izinkundla zokuxhumana ezinhlanu ukusabalalisa okuqukethwe. Amakhono abalulekile kule ndawo afaka ukuphathwa kwemithombo yezokuxhumana, isu lokuqukethwe, nokuqondiswa kokudala.
Ukukhangiswa Kwenjini Yokucinga - Ukuthola ithrafikhi ngosesho olungokwemvelo nolukhokhelwayo kudinga ukuthi abathengisi bahlale njengamanje ngezinguquko eziqhubekayo. Isibonelo, iGoogle ibuyekeza i-algorithm yayo ngaphezu kwezikhathi ezingama-500 ngonyaka. Ukukhulisa ukusebenza kwenjini yokusesha (i-SEO) kanye nobukhona bezinto eziphilayo kuyinto ehamba phambili phakathi kwama-69% wabathengisi abangena ngaphakathi eNyakatho Melika i-SEO, ukukhangisa kokusesha okukhokhelwayo, kanye nokwenza iwebhusayithi kube ngamakhono abalulekile kule ndawo.
Ukukhiqizwa Kwevidiyo - Abathengisi abangama-76% bakhiqiza amavidiyo njengengxenye yecebo labo lokumaketha Lawa mavidiyo angafaka izingxoxo, ukugqwayiza, nezinye izitayela zokuxoxa izindaba. Le yingxenye ebalulekile ukufinyelela kuGen Z. 95% wesizukulwane sisebenzisa i-Youtube, kuthi u-50% wabo athi "ngeke baphile ngaphandle" kwewebhusayithi eqhutshwa yividiyo. Amakhono abalulekile kule ndawo afaka ukuhlelwa kwevidiyo, ukugqwayiza, nokukhethwa kokuqukethwe.
Ukuhlaziywa kwedatha - Ama-85% wabakhangisi basebenzisa amathuluzi ama-analytics kumaqhinga abo wokumaketha. I-Analytics yikhono lesibili elinzima kakhulu ukusetha ukuthola ithalente elisha lokumaketha, kanti abathengisi abangama-20% bathi kunzima ukulithola Naphezu kwalobu bunzima, ama-59% wabakhangisi bahlela ukukhulisa amakhono abo wokuhlaziya amabhizinisi edijithali ezinhlanganweni zabo. Ukumbiwa kwedatha, ukubonwa kwedatha, kanye nokuhlaziywa kwezibalo wonke amakhono aphambili kule ndawo.
Ukubhloga - Ama-70% wabakhangisi basebenzisa amabhulogi ukusabalalisa okuqukethwe ngezinhloso zokumaketha futhi ukubhloga kaningi kungakhuphula izinkampani zezimoto ezishicilela okuthunyelwe okungu-16 + ngenyanga zithole ithrafikhi ecishe iphindwe ka-3.5 kunezinkampani ezishicilela phakathi kokuthunyelwe kwenyanga okungu-0-4. Amakhono abalulekile kule ndawo afaka ubuciko, ukubhala ikhophi, kanye nokuqala.
Amakhono Okusebenza - Amakhono okusebenza enamasu yikhono eliyinhloko elibekwa abathengisi bedijithali njengabalulekile ekubanikeni bakwazi ukuhlangabezana nezimfuno zabo jikelele. Kodwa-ke, kutholakale futhi ukuthi kuyikhono elinzima kakhulu ukusetha ukuthola ithalente elisha lokumaketha. Ukwenza isabelomali, ukuqondanisa kwenhlangano, kanye ne-ROI nokukalwa kwamamethrikhi onke amakhono aphambili kule ndawo.
Amakhono Okuthola Umsebenzisi - I-analytics yesipiliyoni somsebenzisi iyindlela eyinselele kakhulu kubakhangisi. Kodwa-ke, ongoti besipiliyoni somsebenzisi bangakhanyisa ngokuthandwa kwamakhasimende nokuziphatha futhi basize ukuklama amawebhusayithi nezinhlelo zokusebenza ukushayela ukugcinwa kwamakhasimende nokuthengisa. Ukucwaninga, ukuhlinzeka ukuqonda kokuziphatha kwamakhasimende, nokufaka amakhodi wonke amakhono abalulekile kule ndawo.
Amakhono Wokwakha Okuyisisekelo - Abathengisi abangu-18% babika amakhono okuklama okunzima ukuwathola kuthalente elisha lokumaketha, okwenza kube ikhono lesithathu elinzima kakhulu ukusethwa kuthalente elisha lokumaketha Kodwa-ke, okuqukethwe kokumaketha kuwo wonke amafomethi asadinga ukubonakala ekhanga, futhi lawa makhono ayaqhubeka ukufuneka kakhulu. Amakhono abalulekile kule ndawo afaka ukwakheka kwezithombe, ubuciko, nokwakhiwa kokubuka.
Nayi i-infographic ephelele:
Tags: Ama-Analyticsama-bachelor ekumaketheniibhulogiUkukhangisa OkuqukethweIdathadesignimeyiliizinga lokuthengisaimisebenzi yezokumakethaama-ops wokumakethaimaryville UniversityUkumakethwa Kwamaselula Nethebulethiukusesha okuphilayoukusesha okukhokhelweSesha MarketingSocial Media Marketinguiisipiliyoni somsebenzisiuxukubukwa kwevidiyoukukhiqizwa kwevidiyo